hetsika | FI.MPI.MA. Frantsa
Aujourd'hui, 04 2020
FIKAMBANAN’NY MPIKABARY MALAGASY - Faritany Frantsa
Miaro sy manondrotra ny fomba amam-pitenenana malagasy amin’ny alalan’ny kabary
Izay tia ny tenindrazany, tia ny tanindrazany
Kabary ain'ny firaisam-pirenena, miasa ho an'ny fampandrosoana ny maha olona; kabary antsika jiaby
Mankalaza ny faha-10 taona ny FI.MPI.MA. Faritany FRANTSA
01/09/2019 - 0:00
Hira faneva FI.MPI.MA.
Hira faneva faha-10 taona ny FI.MPI.MA. Faritany FRANTSA
Iray volan’ny teny malagasy Faritra andrefan’i Frantsa
Hira faneva faha-50 taona
10 taona Faritany Frantsa tao Toulouse
10 taona Faritany Frantsa tao Rouen
10 taona Faritany Frantsa tao Rennes
10 taona Faritany Frantsa tao Lyon
10 taona Faritany Frantsa tao Bordeaux
10 taona Faritany Frantsa tao Avignon
Lanonana fanokafana ofisialy ny faha 10 taona
Mankalaza ny faha 10 taonany ny FI.MPI.MA. Faritany FRANTSA
Fotoam-panokafana ny Taom-piofanana 2014-2015 :
Ity dia anisan’ny tarazo ato amin’ny FI.MPI.MA. ho fanokafana ny taom-piofanana, hamelabelarana fohy ny mikasika ny Fikambanana sy ny fiofanana an-kabary, ary hanasana ny malagasy indrindra ireo manam-paniriana hiofana an-kabary mba hirotsaka an-tsehatra.
Amin’izany koa no hampitan’ny Mpikambana ao amin’ny andia VATOMANGA ny Faneva amin’ireoMpiofana efa mirotsaka an-tsehatra (ny VAKOMANITRA).
Natao tamin’ny alahady 16 novambra 2014 izany, nanomboka tamin’ny telo ora hariva ary nifarana tamin’ny enina ora (15 h -18 h).
Tao amin’ny Salle municipale Castelbou, 22 rue Léonce Castelbou, 31000 Toulouse no nanaovana izany. Nanasana ny Malagasy eto Toulouse sy ireo Vondrona Malagasy (fiangonana …), ary ny Fikambanana Malagasy eto Toulouse izany ; ary notronon’ny Solontenan’ny Mpiofana avy ao amin’ny Rantsana FI.MPI.MA. Bordeaux.
Natomboka tamin’ny fidiran’ny Mpampianatra an-kabary eto ami’ny Sampana sy ny Filohan-tSampana izany ; narahina kabary fandraisana fohy sy fihirana ny Hiram-pirenena ary ny hira Fanevan’ny FI.MPI.MA. ; nofaranana tamin’ny Hisaraka vetivety.
Tena naredona ny hira satria efasamy niomana tamin’izany daholo na ny Mpikambana na ny Mpiofana.
Rehefa vita ny kabary fanokafana nataon’ny Filohan’ny Sampana sy ny famelabelarana nataon’ny Mpampianatra iray manodidina ny FI.MPI.MA. sy ny fiofanana an-kabary, dia niroso tamin’ny kabarin’ny Filohan’ny Faritany FI.MPI.MA. Frantsa izay nifandray tamin’ny « skype » avy any an-tanindrazana ; tratry ny « delestage » moa tamin’izay ka dia tapaka ny fifandraisana ka notovonan’ny Tonian’ny Faritany ny fitenenana. Nanorana koa ny andro teto Toulouse tamin’izay.
Avy eo dia niroso tamin’ny Fampitana Faneva.
Rehefa vita izany dia nisy seho an-kabary samihafa nifandrombonan’ny Mpikambana izay niomana tamin’izany.
Namaranana ny fotoana ny fiarha-mizara ny endim-balala sy tonom-bomanga ary ny ravimboafotsy sy ny ranom-panala.
Afa-po ny mpikarakara sy ny mpanatrika, nahazo akony samihafa, na avy amin’ny Malagasy eto Toulouse, na avy amin’ny Mpiofana any Bordeaux, izay raha fehezina amin’ny teny fohy dia hoe : nahafinaritra, tsy mbola nisy lanonana toy iny.
Ilo mby an-doha izany ka tsy araraka an-tany, ka dia hiezaka hanatsara hatrany ny amin’ny ho avy.
Fiaraha-miarahaba tratry ny taona :
Ny alahady 25 janoary 2015 no nanatontosana ity fihaonana noho ny Asaramanitra ity.
Tao amin’ny Salle Notre Dame de Lafourguette, 195 route de Seysses, 31100 Toulouse no natao ny fihaonana.
Nanasana ny Mpikambana sy ny Mpiofana ombam-bady aman-janaka, ary ireo tapaka sy naman’ny Fikambanana izany.
Natomboka tamin’ny fiaraha-misakafo atoandro, ary noefaina tpy ny lanonana manaram-penitra ato amin’ny FI.MPI.MA.
Nafana tokoa ny fiarahana fa samy nandray anjara tamin’ny fanentanana ny rehetra, indrindra teo amin’ny fiantsana hira tranainy sy kalon’ny fahiny, ohatra ny « Mifankatiava ihany raha mbola velon’aina ». Nalai-misaraka nefa moa ampitso koa mbola be ny andraikitra miandry. Tsy ho lava resaka fa mitovy amin’ny voalaza ery aloha ny fiarahana.
« Dobodoboka fomban’aponga, tabataba an’ny maro kilonga, k’asakasakareo tsy mba tonga » hoy ny tononkalo.
Ny manaraka dia ny hetsika amin’ny 11 avrily 2015 :
-Fanokanana ny Sampana FI.MPI.MA. Toulouses y fiainian’ny Filohan-tSampana
-Fanasalorana lamba ireo Mpikambana ao amin’ny andia VATOMANGA
-Famoahana ireo Mpiofana afa-panadinana avy ao amin’ny andia VAKOMANITRA eto Toulouse sy ny andia LAZAN’NY BORDEAUX.
Mbola omena amin’ny manaraka ny andinidininy.
Manasa re lahy, manasa re roy
Hiverina eny ambony
Rafitry ny pejy
+33 6 09 04 40 67
+33 6 82 59 56 55
+33 6 28 72 06 30
17 rue de l'Avre 75015 - Paris
© FI.MPI.MA. Frantsa, 2014